Andry Rajoelina : Hamitaka fanindroany ! -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Hamitaka fanindroany !
27/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Dia tsy misy valaka amin’ny nataon-dRavalomanana Marc no nataon’i Andry rajoelina nandritra ny ffiampiarahabana noho ny taona vaovao tetsy Ambohimangakely ny faran’ny herinandro teo, ny an- dRavalomanana dia nambarany fa ataony mitovy amin’ny nitantanany ny orinasa Tiko no hitantanany ny firenena. Izany hoe nalainy avokoa izany ny tsena rehetra, ary ny tanin’olona sy ny tanim-panjakana dia namidiny sy nampanofainy teratany vahiny. Ny an’i Andry Rajoelina indray dia nambarany fa nampanantena ny vadiny izy fony vao mpivady vao izy ireo fa hitany avokoa i Angletera sy ireo firenena nampanantenainy, izany hoe mety hampivadian’ i Andry Rajoelina amin’ ny firenena iza indray izany Gasikara. Rehefa mpivady moa dia mizara ny fananana. Fanoharana tiana ho entina izay nataon’ny filoha nifandimby ihany io hoentina io, satria dia efa nampahitana fahoriana ny Malagasy, ary izao indray dia hampanantenaina ny tsy misy.
Fanontaniana apetraka amin’ i Andry Rajoelina hoe, hatraiza ny fanovana nentin’ny revolisionina volom-boasary. Aiza izao ny toerana misy an’i Madagasikara ?. Ny fampanantenana izay napetrak’ i Andry Rajoelina toa ny fahamoran’ny entana fampiasa andavanandro ve tena tanteraka tokoa? Izay mantsy ny kabary nataony fony vao tonga teo amin’ny toerana izy. Moa ve tsy nosarontsaronana tamin’ ny tsena mora ny fampanantenana natao, ary izany dia tsy naharitra ela. Izay akaiky azy sy mpiray petsapetsa taminy ihany no nahazo tombontsoa tamin’izany. Efa namitaka ny Malagasy Rajoelina tamin’izany, ary mbola mikasa hamitaka fanindroany indray.
Noho izany manoloana ireo kabary izay fitaka ataon’ ny mpanao politika amin’ izao fotoana izao, izay kabary feno fampanantenana poakaty no asetrin’ izy ireo, satria mamy ny faniriana hahazo seza. Marihana etoana fa misy ny mpilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena no mahay mampandry adrisa amin’ ny alalan’ ny fihetsiketsehana maro isan-karazany, noho izany dia aoka tsy ho voafitaka ny rehetra feno 18 taona .
Ny teboka farany izay resahina kosa indray dia mikasika ireto artista mivoy mozika mafana. Tandremo koa sao fitahiny. Ataony namana dia tsy aloa vola rehefa amin’ny propagandy. Sokafy ny maso ry namana isany.
Sehatra iray mahasarotiny ny Malagasy ny tany, ny tanindrazany. Novalian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny filazana ny fanaovana varo-boba ny tany sy ny fivarotana izany 7 ariary ny metra toradroa amin’ny vahiny. «Tsy azo ekana izany. ...Tohiny
Tranon’ny profesora Zafy Albert : Namidin’ny HAT 5 000 fmg/m2